Wol’aansa Artist Nuuhoo Goobanaaf gargaarsi ummataa gaafatame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Wol’aansa Artist Nuuhoo Goobanaaf gargaarsi ummataa gaafatame
Wol’aansa Artist Nuuhoo Goobanaaf gargaarsi ummataa gaafatame
Artistii Oromoo, Nuuhoo Goobanaa, dhibee sukkaaraan dararamaa jiru wol’aanuuf gargaarsi ummataa gaafatame. Nuuhoo Goobanaa yeroo dheeraadhaaf dhukkubaan dararamaati kan ture. Dhukkubni itti hammaatee, yeroo ammaatti artistiin kuni kan argamu hospitaala ciiseeti. Dhibeen Nuuhoo dararaa jiru kuni hi’rina qaamaas isarraan gayuun hubatameera.
Nuuhoof gargaarsa barbaachisu wolitti qabuuf biyyaafi biyyaan alattis sochiin garagaraa godhamaa jira. Biyya alaatti, birmannaa Nuuhoof, koreen nama torba ufkeessaa qabu dhaabbatee socho’ii eegaleera. Koreen biyya alaa maallaqa wol’aansa Nuuhoof oolu wolitti qabuuf kan karoorfate gama intarneetii fi baankii dhaan. Biyya keessaas deeggarsa wolitti qabuuf sagantaan qophii sirbaa artistoota kana dura Sayyoo Dandanaaf birmataniin karoorfamuun isaa beekameera.
Nuuhoon weellistoota Oromoo hedduu bekamoofi jaalatamoo ta’an keessaa isa tokko. Weellistoota waa’ee aadaa, seenaafi qabsoo Oromoo ummata barsiisuu irratti shoora guddaa taphatan keessaa kanniin tarree jalqabee irra jiran keessatti ramadama. Nuuhoon weellisaa umrii isaa guutuu, xiqqeenna irraa hanga har’aatti, Oromoof sagalee ta’ee hojjataa tureedha. Seenaa Oromoo baranee keessatti, Nuuhoon, kanniin Oromoof jiraatan keessaa isa tokko yoo jedhame itti hinguddatu. Sirboota isaatiin Nuuhoon Oromoo tokkoomsuufi riqicha jaalalaa uumuuf gumaachi Nuuhoo sadarkaa ol’aanaa irra kan kaayamuudha.
Oromoon hundi bakka jiruu artisti beekamaafi jaalatamaa, Nuuhoo Goobanaaf, birmate taanaan fayyaan isaa akka deebi’u abdii guddatu jira. Nuuhoo wol’aanuun dirqama Oromummaa bayuudha, jedhu koreen gargaarsaa.
Namoonni Nuuhoo gargaaruu barbaaddan daandii lamaan kanniinitti dhimma bayuu dandeettan.
Crowd funding (GoFundMe-gama intarneetii)
Birmannaa Nuuhoo Goobanaaf as bira tuqaa
Maallaqa gama baankii dabrsuu
Nuuhoon jiruu isaa guutuu nuuf, Oromoof, kenne. Nutis waan dandeennu kennuudhaan carraaqqii fayyaa Nuuhoo deebisuuf godhamu kana bira dhaabbachuu qabna.
Rabbiin artistii jaalatamaafi kabajamaa Oromoo, Nuuhoo Goobanaa, haa fayyisu jenna, umrii isaas haa dheeressu!
fayyaa nuuhoo goobanaa
Previous articleAkka ardii Afrikaatti haalli Bulchiinsa Gaarii Itoophiyaa sadarkaa maalirra jira?
Next articleHawwiin lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa seenuuf bayanii Maalaawii keessatti eebjuuu ta’e